GRC Umbungu ukusebenza-GRC Umbungu ukusebenza-Nanjing BeiLiDa Entsha Mathiriyali Indlela Engineering Co., Ltd.
Iziphumo ze-GRC Wormhole
Ulapha : Ikhaya>imveliso>GRC isiphelo esiphakamileyo>Iziphumo ze-GRC Wormhole
Inani Model: GRC wormhole
I-GRC (ikhonkrithi yeglasi yokuqinisa ikhonkrithi) isebenzisa udaka lwesamente njengezinto ezisisiseko, kwaye isebenzise i-alkali enganyangekiyo yiglasi yokuqinisa ukusebenza kweGRC. Inkqubo yokuvelisa yeGRC yohlobo olukhethekileyo. Sebenzisa ibrashi yokuhambisa umoya ukutshiza umxube wesamente kunye neglasi kwifreyidi yokubumba, inokuphucula ukuqina, ukomelela kunye nokuchasana nemveliso ngelixa uqinisekisa ukuthungwa kwezinto.
Umgangatho wemveliso oveliswe ngoku wahluke ngokupheleleyo kuleyo yenkqubo yesiqhelo yokubumba ikhonkrithi. EYurophu naseMelika, iphepha elinye le-GFRC lisetyenziswa ngokubanzi njengebhodi yangaphandle yokuhombisa.
Ulondolozo lwamandla kunye nokwehliswa kokukhutshwa: xa kuthelekiswa nezinye izinto ezivalelayo, i-GRC isebenzisa amandla amancinci kwinkqubo yokwenza kunye nofakelo. Abaphengululi baseJapan benze uthelekiso lokukhutshelwa kwekhabhoni phakathi kwodonga lwe-GRC kunye nebhodi eqinisiweyo yodonga, kunye nokusetyenziswa kwodonga lwe-GRC kunciphisa ukuphuma kwekhabhoni nge-30%.
Ilitye lokulinganisa le-GRC